Akụkọ - Gini bu odi n’iru NC machining specialty na otu esi ahota?
Na China, ọpụrụiche CNC ịkpụzi akpụzi aghọọla ihe niile n'ime afọ iri gara aga, ndị na-emepụta ngwa ọrụ igwe CNC na-agbapụkwa ebe niile. Zọ mbata nke ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ NC na-agbada ala ma na-erughị ala, a na-ejikwa ngwa ngwa nkà na ụzụ nke NC machining specialty. Ọ dị mma maka oge millet na égbè.
Site na ịrị elu nke inntanetị na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-eto eto na-achụso ọrụ nke ,ntanetị, nke na-eduga n'ịkọ ụkọ nke talent na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ NC. Ihe omumu nke ndi oru NC machining adighi nma. Ọ bụkwa otu ihe ahụ n'ọhịa nyocha na mmepe nke ngwaọrụ igwe CNC. The ọhụrụ nke CNC machining ọkachamara technology enweghị ike iche na akụrụngwa na teknụzụ. Na njedebe ikpeazụ, ọ bụ enweghị nduzi nke ndị ọkachamara na-arụ ọrụ CNC Ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa mere teknụzụ ọnụọgụ ọnụọgụ ụlọ ji dị n'azụ Japan na Germany.
Teknụzụ na-ahụ maka ọnụọgụgụ, nke a makwaara dị ka teknụzụ ọnụọgụ kọmputa, bụ teknụzụ nke ịchọpụta njikwa mmemme dijitalụ site na kọmputa. A na-ebunye ntuziaka micro nke kọmputa na-eme site na nhazi iwu na ngwaọrụ ngwa ngwa iji kpoo moto ma ọ bụ hydraulic actuator iji mee ka akụrụngwa na-agba ọsọ. Ndị ọkachamara CNC bụ ndị ọrụ ahụ mechara usoro ọrụ a ma bụrụ ndị ọrụ aka ọrụ aka ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, ụdị talent ndị a n'ozuzu ha n'ozuzu ya Enwere ike inweta ya site na ọwa abụọ: otu bụ talent ndị NC zụrụ ọzụzụ n'ụlọ akwụkwọ ọzụzụ ọkachamara; nke ọzọ bụ CNC ọkachamara na teknụzụ ndị na-eto eto mgbe ndị ọrụ mụtara teknụzụ CNC site na ọzụzụ ọrụ nke ụlọ ọrụ.
Na oge nke ngwaahịa upgrading, àgwà na nkenke nke ngwaahịa na-esiwanye ike, na chọrọ maka CNC machining ọpụrụiche nwekwara elu na elu. Enweghị talent na CNC machining ọpụrụiche emewo ka ụkọ nke talent na ahịa olu akwa na-acha anụnụ anụnụ. N'ọdịnihu, ọ ga-abụkwa otu ụdị onyinye maka ụlọ ọrụ ga-adị ndụ.